Te hampitsahatra ny fiankinan-doha amin'ny lalao video amin'ny fepetra hentitra | i Shina Androidsis
Mikasa ny hamehy ny fiankinan-doha amin'ny lalao video ny governemanta Sina
Aaron Rivas | | Lalao Android, About us
Betsaka ny mpanjifa mandany ora maro eo alohan'ny telefaonaNa mba hifandraisana, hamaky, hiasa, hananana vaovao hatrany, hiarahana amin'ny tanjona hafa. Ary na dia toa mahasalama aza izany dia mampidi-doza ny mandany ora maro amin'ny telefaona isan'andro.
Ity olana ity dia toa miha tsy voafehy ao Shina., ary bebe kokoa ankehitriny ny manampahefana ao amin'ny governemanta dia manandrana mampihatra fepetra matanjaka mba hifehezana ny fiankinan-doha amin'ny lalao video, ny toe-javatra izay naroson'ireo tanora sinoa, mihoatra ny zava-drehetra, nandritra ny fotoana elaela.
Vao haingana, Ny fampahalalam-baovaom-panjakana lehibe ao Shina dia nampitandrina ny amin'ny fiankinan-doha amin'ny lalao videosatria mifidy ny mpandrindra mba hamerana ny fankatoavana ny lalao vaovao.
«Loza lehibe ny mankafy lalao an-tserasera: ny fiarahamonina iray manontolo dia tokony hihetsika hametraka tambajotra sy rindrina ho an'ny tanora »ny masoivohom-baovao Xinhua ofisialy dia nilaza tamin'ny fanehoan-kevitra navoaka tamin'ny talata. "Ho an'ny ho avin'ny firenena, tsy azontsika atao mihitsy ny mamela ny orinasan-kilalao hitady harena amin'ny alàlan'ny fitaomana ny tanora ho lasa andevo (lalao)".
Niseho ilay lahatsoratra taorian'ny namoahan'ny manam-pahefana antontan-taratasy tamin'ny herinandro lasa, manazava ny fomba Sina, eo ambany fitarihan'ny filoha sinoa Xi Jinping, dia hanatsara ny myopia amin'ireo zaza tsy ampy taona.
Fizarana iray ao amin'io antontan-taratasy io no milaza fa ny State Press and Publications Administration - maso iray mifehy ny filokana vaovao - mametra ny isan'ny lalao video an-tserasera vaovao, dia hametra ny fotoana lanin'ny zaza tsy ampy taona amin'ny lalao ary hananganana rafitra fampahatsiahivana mety ho an'ny taona ho an'ny lalao.
Ny fiankinan-doha amin'ny filokana dia tsy hahatonga ny zaza tsy ampy taona hanao tsirambina ny fianaranyfa koa mamitaka azy ireo amin'ny fomba fijery diso an'izao tontolo izao izay mety "handevina ny loza miafina ao amin'ny fiarahamonina", araka ny fanehoan-kevitr'i Xinhua. Nanonona ny fanadihadiana dia nambarany fa ny ankizy any ambanivohitra dia mora resin'ny fiankinan-doha satria manana fiainana ara-tsosialy tsotsotra kokoa.
Mila «fanaraha-maso henjana» ny indostrian'ny lalao video any Shina na dia nanjary sehatra lehibe iray lehibe amin'ny toekarena aza izany, hoy ny mpitondra tenin'ny Antoko Komunista People's Daily tamin'ny fanehoan-kevitra iray hafa navoaka ny talata teo. "Ny tokony hiarovantsika tena dia ny fiankinan-doha, fa tsy ny lalao amin'ny Internet"hoy izy.
Ireo fanehoan-kevitra ireo tany Shina, narahin'ny fanovàna farany nataon'ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana ao amin'ny boky fanasokajiana aretina, izay milaza fa Ny lalao video mandreraka dia mendrika ho fepetra ara-pahasalamana, dia nampandre ny fikambanan'ilay faritra.
Nilaza ny masoivohon'ny Firenena Mikambana fa amin'ny fanasokajiana ny antsoina hoe aretina filokana ho fepetra misaraka dia ho mailo kokoa ny governemanta, ny fianakaviana ary ny mpiasan'ny fahasalamana ary ho vonona hamantatra ny loza mety hitranga, hoy ny tatitra nataon'ny Reuters tamin'ny volana Jona.
"Ny lalao video dia mampiankin-doha toy ny triatra", hoy ny fampitandreman'i WHO.
Ny indostrian'ny lalao any Sina dia mizaka ny fitomboany miadana indrindra ao anatin'ny folo taona ao anatin'ny fiatoana iray volana amin'ny faneken'ny governemanta ny lalao vaovao. Tamin'ny tapany voalohany amin'ity taona ity, ny vola miditra amin'ny sehatry ny lalao video nasionaly dia nitombo 5% isan-taona, ka nahazoana vola 15 miliara dolara, hanamarihana ny fitomboan'ny isa tokana voalohany hatramin'ny taona 2009 farafaharatsiny, hoy ny mpikaroka CNG.
Ny lalao video rehetra dia tokony hanana fahazoan-dàlana hamoahana any Shinana ireo misy aza maimaimpoana. Ny State Administration of Press and Publications, niforona tamin'ny volana martsa ho ampahany amin'ny fandaminana indray ny governemanta izay manamafy ny fangejan'ny Antoko Kaominista ny indostria, dia tsy nahazo alalana lalao vaovao nanomboka ny 28 martsa.
Tao anatin'izany fotoan-tsarotra izany dia namoaka ny fihenan'ny vola azony voalohany hatramin'ny taona 2005 ny goavambe Shinoa Tencent Holdings nanomboka tamin'ny XNUMX noho ny fidiram-bolan'ny lalao. Ny ampahan'ny Tencent, izay mitantana ny orinasan-dalao horonantsary lehibe indrindra manerantany, dia nidina sahabo ho 20% hatreto tamin'ity taona ity. NetEase, orinasa kilalao fahenina lehibe indrindra manerantany ary mpifaninana akaiky indrindra an'i Tencent any Shina, dia nandefa vola kely ambany noho ny nandrasana tamin'ny telovolana faharoa. Ireo rehetra ireo noho ireo fepetra ampiharin'ny governemanta, mihombo hatrany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Mikasa ny hamehy ny fiankinan-doha amin'ny lalao video ny governemanta Sina
Fampisehoana lehibe maromaro an'ny tanora Xiaomi Mi 8 voasivana
Navoaka tanteraka tao amin'ny tranokala Motorola ny Moto P30 Play